विराटनगरको आरोहण गुरुकुलमा ‘मसान’
विराटनगर, १७ चैत-सुनसान मध्यरात जस्तो, चारैतिर चकमन्न छ । दायाँबायाँ कोही देखिँदैनन् ।
पर एक जोडी आफ्नै कुरामा व्यस्त छन् । लाग्छ, यो जोडी भर्खरै माया प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको छ । माथिबाट एउटा पिलपिले बत्ती पनि बल्दै गरेको । हो यहीँ चल्दै थियो मसान । यसै साता विराटनगरको गुरुकुललाई मसानले तर्साएको छ । साहित्यकार गोपालप्रसाद रिमालको कृतिमा आधारित नाटक ‘मसान’ मञ्चन गरिएको हो ।
‘मसान’ हेर्दै गर्दा कृष्णले कुनै युवतीलाई प्रेम गरेर घरमा ल्याई पत्नीको स्थान र अधिकार दिएको छ। सहचार्य र सहवासको केही वर्षपछि युवतीलाई आफूबाट सन्तान नभएकोमा छटपटी हुन थाल्छ । उसको सन्तुष्टिका लागि भानिज भोटूलाई ल्याएर पालिन्छ । भोटुलाई पालेर हेलेनको आमा कहलाउने आकांक्षा झन् बढ्छ र उसको आग्रहमा कृष्णको पुनःविवाह हुन्छ । कृष्ण हेलेनलाई दिएको प्रेम ‘दुलही’लाई दिन चाहँदैन, त्यसैले दुलहीमा कुण्ठा उत्पन्न हुन्छ र सौतेनी डाहा जाग्छ । युवतीका आग्रहले सन्तानका निम्ति कृष्णलाई दुलहीलाई माया नगरे पनि निजसँग शारिरिक सम्बन्ध जोर्न कर लाग्छ ।
अन्तत: छोरा जन्मन्छ, उनले चाहेको जस्तै छोरा भएपछि घरमा निकै खुसी छाउँछ । छोराकी आमा भएर पनि दुलहीलाई कृष्णको स्नेह सहानुभूति र सम्मान प्राप्त हुँदैन ।
आफैँले पाएको छोरा पनि दुलहीले आफूले राख्न पाउँदिनन् । सौताले छोरा लिएर हिँड्दा दुलहीमा औडाहा पैदा हुन्छ । सुत्केरी र बिरामी दुलहीको औषधोपचारको व्यवस्था गरे पनि अनुराग नदेखाएकाले दुलही जीवनदेखि निरास हुन्छिन् र सौतालाई जीवन बिगारी दिएको दोष लगाउँछिन् ।
हेलेनको जोडले पनि कृष्णको भावमा खास परिवर्तन हुँदैन । पत्नीको स्थानमा राखेकी उनले दुलहीलाई पनि प्रेम दिनुपर्ने हठ देखेर त्यो अधिकार दिन नसक्ने कारण उसको भातृत्वहरणद्वारा उसमाथि आफूले गरेका अन्यायको रहस्योद्घाटन गर्छ । यस रहस्योद्घााटनबाट हेलेनको पतिको एकलौटी प्रेम पाउनाको मोह भंग हुन्छ र ऊ विद्रोह गरेर घर छाडी हिड्छे । यो मसानको आधिकारिक कथा हो । यसलाई रंगमञ्चमा हुबहु उतार्ने प्रयास गरिएको छ ।
यस आधिकारिक कथावस्तुको साथ वाग्मती र कृष्णकी बहिनीको कथा पनि चर्चाका क्रममा थाहा पाइन्छ । वाग्मती सौताको पीरले कृष्णकी नोकर्नी भएकी छे । दुलहीलाई बाग्मतीले आफ्ना पिर र बेदनाका रसास्वादन गराइरहँदा रंगमञ्च स्तब्ध बन्छ । पुस्तकमा लेखिएका विषय र रंगमञ्चमा देखाइएका विषयहरू मर्मस्पर्शी रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
चैत १० गतेदेखि नाटक एकसातासम्म चल्यो । सहित्यकार स्व. गोपालप्रसाद रिमालद्वारा लिखित ‘मसान’ नाटकको मुकेश कर्णले निर्देशन गरेका छन् ।
नाटकको सन्देश अझै पनि सान्दर्भिक रहेकाले रंगमञ्चीय नाट्य रुपान्तरण गर्न मञ्चन गरिएको निर्देशक कर्णले जानकारी दिए । मसान नाटकमा दीपा पोखरेल, विजया नेपाल, वर्षा न्यौपाने, सम्झना आर्चय, निर्मल शर्मा, रिदम बस्नेत, अशोक गौतमले अभिनय गरेका छन् । नाटकको लाइट व्यावस्थापन भरत कार्की र स्टेज व्यावस्थापन विकास पराजुलीले गरेका छन् ।
गोपालप्रसाद रिमाल नेपाली साहित्यमा प्रगतिवादी साहित्यकारका रूपमा चिनिन्छन् । वि.सं. १९७५ जेठमा जन्मिएका रिमालको मृत्यु वि.सं. २०३०, कार्तिकमा भएको थियो । उनले लेखेका कृतिहरूमध्ये ‘मसान’ चर्चित नाटक हो ।
चैत १७, २०७४ मा प्रकाशित
सुमन लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर एकका प्रतिनिधि हुन् ।
एम्बुलेन्स नभएपछि .. कालिकोटको दुर्गम नरहरिनाथ गाउँपालिकाको बिरामीलाई स्ट्रेचरमा उपचारका लागि सदरमुकाम मान्म खाँडाचक्रममा लगिँदै । शुरबहादुर सिंह-कर्णाली प्रदेश रासस, सुर्खेत ।
नेता खनाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताबीच भेटवार्ता